बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको आठौँ नगर सभा - Budhanilkantha News
बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको आठौँ नगर सभा
२०७८ असार ९, बुधबार १९:५८
बूढानीलकण्ठ, असार ०९ गते । बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको आठौँ नगर सभा नगरप्रमुख उद्धव खरेलकाे अध्यक्षतामा मिति २०७८ असार ९ गते बसेको छ । नगर सभा दुई सत्रमा संचालन गरिएको थियो, खुल्ला सत्र र बन्द सत्र ।
कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा विशेष अतिथिहरू, नगरप्रमुख र उपप्रमुखले स्थानीय पाठ्यक्रम विमोचन गरेका थिए । बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका शिक्षा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख जगन्नाथ उपाध्यायले १०० पूर्णाङ्क रहने स्थानीय पाठ्यक्रम- मेरो बूढानीलकण्ठ (कक्षा १-४) र हाम्रो बूढानीलकण्ठ (कक्षा ४-८) लाई यसै आ. व. देखि नगरपालिका भित्र रहेका सबै विद्यालयहरुको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने बताएका छन् ।
पहिलो सत्रकाे मुख्य भागमा नगरप्रमुखले चालु आ.व. २०७७/०७८ काे बजेट कार्यान्वयनकाे समिक्षा गर्दै नगरपालिकाले लक्ष्य अनुसार झण्डै ५० प्रतिशत याेजनाहरू कार्यान्वयन गरि प्रगती हासिल गरेकाे बताएका छन । त्यसै क्रममा, उपसथित विभिन्न राजनितिक पार्टीका प्रतिनिधिहरू तथा उपस्थित माननीयहरूले नगर कार्यपालिकालाइ आगामी आ.व. २०७८ ०७९ काे लक्षय प्राप्तिका लागि सुझाव र शुभकामना दिएका छन ।
कार्यक्रमकाे बन्द सत्रमा नगर उप प्रमुख रमा देवी राइले नगरपालिकाकाे आ.व. २०७८/०७९ काे निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नका साथै नगरपालिकाकाे आर्थिक विधेयक, २०७८ र नगरपालिकाकाे विनियाेजन विधेयक, २०७८ पेश गरेका छन । २०७८/०७९ काे अनुमानित आय रू. १ अर्ब ८२ कराेड ९२ लाख ७६ हजार र अनुमानित व्यय रू. १ अर्ब ८२ कराेड ९२ लाख ७६ हजार रहेकाे उपप्रमुखले बताएका छन ।
नगरप्रमुखकाे अध्यक्षता र उप प्रमुखका संयाेजजकतामा बसेकाे बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको आठौँ नगर सभामा बागमती प्रदश मा. दिपक निराैला, मा. न्युच्छे नारायण श्रेष्ठ, मा.सीता लामा, मा. भिमसेन खत्री, नगर कार्यपालिका सल्लाहकारहरू, सबै वडा अध्यक्षहरू तथा सदस्यहरू, बू.न.पा. प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, नेपाल प्रहरी, नगरपालिकाका कर्मचारीहरू तथा पत्रकारहरूकाे उपस्थिति रहेकाे थियाे ।